दसैं, तिहार र छठ मनाउन पनि मापदण्ड ! – bampijhyala.com
Home > कला/ साहित्य > चाडपर्व > दसैं, तिहार र छठ मनाउन पनि मापदण्ड !
२५ आश्विन २०७७, आईतवार ०६:२६ bampijhyala
बाँपीझ्याला, काठमाडौं । दसैं, तिहार, छठ लगायतका चाड पर्व नजिकिदै गर्दा सरकारले यो वर्ष चाडपर्व मनाउनका लागि मापदण्ड सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले जारी गरेको मापण्ड पालना नगर्ने व्यक्तिलाई सरकारले संक्रामण रोग ऐन, २०२० अन्तरगत कारबाही गर्ने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ ।
दसैं तथा अन्य जात्रा तथा पर्वमा प्रसाद तथा टीका सकेसम्म वितरण नगर्न मन्त्रालयले आग्रह गरो छ । टीका तथा प्रसाद वितरण गर्नै परे एउटै घरका व्यक्तिबाहेक अरुसँग भेट नगर्ने र गर्नै परे दुई मिटरको दूरी कायम गर्नु पर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
चाडपर्वमा घर बाहिर नजाने र जानै पर्ने भए माक्स अनिवार्य लगाउनु पर्ने भएको छ । धार्मिकस्थल तथा मेलापर्वमा २५ जनामात्रै भेला हुन पाउने तथा अभिवादन गर्दा टाढैबाट नमस्कार गर्नु पर्ने छ ।
१ जेष्ठ २०७८, शनिबार १९:५६ bampijhyala
कोरोना संक्रमणबाट विगु गाउँपालिकामा एक बालकको मृत्यु २५ आश्विन २०७७, आईतवार ०६:२६
नेपाल सुपर लिगको उपाधि काठमाण्डौंलाई २५ आश्विन २०७७, आईतवार ०६:२६
८ हजार ४६ थपिए, ५ हजार ४५५ कोरोनामुक्त, १८७ को मृत्यु २५ आश्विन २०७७, आईतवार ०६:२६
बेइजिङ र मस्कटबाट ११५० वटा अक्सिजन सिलिन्डर ल्याइँदै २५ आश्विन २०७७, आईतवार ०६:२६
दोलखा जिल्लामै अक्सीजन प्लान्ट स्थापना गर्ने डिसिसिएमसीको निर्णय २५ आश्विन २०७७, आईतवार ०६:२६